kugeza - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'kugeza'
Farirai kugeza madzimayi
Manga muchizviziva here kuti mukadzi paanoti kumuporofita imba yangu ikunetsa murume haasikurara kumba chero bonde neni haachadi madzibaba voti oyi muteuro uyu mogeza 6days katatu pazuva anenge atoona kuti dambudziko riri pakugeza .
Tiri mugore rezvidzidzo
kugeza mupositori gore rezvidzidzo muporofita Madzibaba
Muchando vanhu havagezi!
2016 WATER BILL SUMMARY
kasi mvura yacheaper?
kugeza chando mvura zinwa
kugeza rwizi baba mwana
Ukaona munhu anogeza everyday muchando chino musashamiswe, imvura yekumasowe yekubvisa mhepo!
kugeza mvura bocha chando cha 2017
ndinamatireiwo - journey mercies
Hama dzangu ndinamatireiwo, things are not looking gud for me. Handizivi kuti kwandiri kuda kuenda ndodzoka ndiri mupenyu here nekuti kwakaona. Kuti ndirege kuenda hazviiti coz it's a must. Namatai pliz ndidzoke nyama nemweya zviripamwechete. Ndiri kudemba kuti dai ndisina hangu kuzvarwa nekuti hupenyu hwazondiomera nhasi. Hameno ndikadzoka ndiri mupenyu, ndirikuenda kunogeza.
kugeza chando mvura munamato chando cha 2017
ndofunga ndaona njuzu
Ndikuti ndikatarisa muDish remvura yekugeza ndikuona munhu akanditarisa
Ndikati ndigeze naiye oda kundibata maoko ose
Haisi njuzu here?
kugeza chando chando cha 2017 njuzu
rori ye sipo yekugeza
Rori yeGeisha yabheuka! Vanhu vanga vachitobatsira driver kudzosera sipo mumabox!!
kugeza tsaona geisha
kugeza chando mvura chiremba sipo tauro
Ko hazviite here? kut tokandirana round yekugeza .Ini mondikandira October hangu no problem
masasi ekupenga - original sipo
Sipo yandakatenga muna May inenge original haisi kudzima pakanzi Jade
Group revano geza
Hapanawo ane group link revanhu vanogeza hre?,coz munomu vese every day varikungochema chema mumwe ndeanoti sipo yawira mudrain,mombe yadya sipo zvese netowel,mvura yapinda nhunzi,hanzi magetsi apera mvura isati yadziya ummm group rino ndaritadza
kugeza whatsapp sipo
Kugeza ndinenge ndichitoda asi nguva zhinji inopera ndichinamata....zviri nani kuchena moyo pane kuchena muviri
kugeza chando munamato
Kugeza waka dhakwa...
Eish nyaya dzekugeza wakadhakwa idzi ma1, ndanga ndichitoshaya kuti sei sipo isiri kupupumawo izvo ndirikugeza nefoni 😭😭😭😭
kugeza doro foni